Raadi Saameyntaada: Abuur Wadahadallo Caalami ah oo uu Hoggaaminayo Mawduuc La Waxyooday | Martech Zone
Axad, Maarso 22, 2020 Isniin, Janaayo 18, 2021 Douglas Karr
Suuqgeynta saamayntu waxay kuxirantahay magacyada codadka awooda leh ee abuuraya waxyaabaha dhijitaalka ah. Xiriirintani waxay dhalinayaan wada hadallo dhab ah oo ku saabsan farriin calaamadeysan, oo ka faa'iideysanaya abuure u daacad ah oo ku hawlan soo socda kanaallada warbaahinta bulshada, iyagoo wada wacyigelin iyo ka qaybqaadasho
Tani waxay abuureysaa wacyigalin-afka ah oo ku saabsan dadkaaga bartilmaameedka ah, si toos ah iyada oo loo marayo marinnada warbaahinta bulshada ee ay ku qaataan waqtigooda oo dhan. At Raadintaada, waxaan kaa caawinaa inaad u hesho codadka saxda ah ee astaantaada oo aan u oggolaanno inay ka shaqeeyaan faafinta farriintaada.
The Raadi Saameyntaada (FYI) madal suuq geyn saamayn ku leh ayaa u oggolaanaysa sumadaha inay aqoonsadaan kuwa saamaynta ku leh, bilaabida ololeyaasha, la socdaan waxqabadka iyo natiijooyinka warbixinta. Waa xal wax ku ool ah oo hal-hal ah oo suuq-geyn ah oo ka caawin kara PR iyo suuqgeynta suuqgeynta inay macaamiishooda la xiriiraan saamaynta ugu wanaagsan ee astaan ​​gaar ah.
Barmaamijka ugu dambeeya ee FYI waxaa kamid ah awoodaha raadinta oo adag, oo ay kujiraan da'da, goobta, kaqeybgalka, gaaritaanka bulshada, qeybaha warshadaha, jinsiga iyo jinsiyada. Intaa waxaa sii dheer, kobcinta barnaamijka FYI waxay u oggolaaneysaa noocyada inay raadiyaan saamileyaal ereyada muhiimka ah ee ku jira waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Tani waxay ka dhigan tahay in magacyadu ay raadin karaan eray-fure u gaar ah astaantooda iyo saamaynta ay ku leeyihiin shabakadda FYI ee isticmaalay ereyadaas muhiimka ah, ama ereyada la xiriira, ee ku saabsan barxadda warbaahinta bulshada, ama gudaha balooggooda.
Kordhinta lagu soo kordhiyay qaybtan waxaa lagu wargeliyay lix sano oo xog ah, oo ay weheliso jawaab celinta isticmaalaha, runtiina waxay dedejineysaa geeddi-socodka raadinta saamaynta. Noocyadu way yaqaanaan noocyada saamileyaasha iyo tirakoobka dhagaystayaasha ay doonayaan inay bartilmaameedsadaan waxaanan hagaajinnay geeddi-socodka si looga saaro dhammaan dhibaatooyinka oo aan ugu adeegno sida ugu dhakhsaha badan.
Cristine Vieira, Madaxweynaha iyo aasaasaha aasaasiga raadinta raadintaada
Iyo haddii kooxdaada suuqgeynta ay aad u mashquulsan tahay ama aysan khibrad u lahayn la shaqeynta saamileyaasha, FYI waxay leedahay adeeg ikhtiyaari ah oo ay ku dalban karto kooxdooda halyeeyada halyeeyada ah inay kuu fuliyaan. Iyo, natiijooyinkooda waa la damaanad qaaday.
Jadwal u samee Raadintaada Saameyntaada
Ku Saabsan Raadinta Saameyntaada (FYI)
La aasaasay 2013, Raadi Raadintaadu waa horseedka xalinta suuq geynta saamaynta ku leh SaaS ee ay dhisteen suuqleyda suuqleyda. Waxay ku tiirsan yihiin qaar badan oo ka mid ah noocyada ugu sarreeya ee Maraykanka oo dhan, FYI waxay ka faa'iideysaneysaa tikniyoolajiyadda lahaanshaha ee lagu ogaanayo dadka saameynaya, maareynta ololayaasha iyo la socoshada cabbiraadaha Suuqa dhijitaalka ah ee waligiis sii kordhaya, FYI waxay maamushaa xiriirka lala yeesho magacyada waxayna ku lammaaneysaa saamileyaasha saxda ah si ay u keenaan natiijooyin dammaanad leh. FYI waxay xarunteedu tahay Scottsdale, Arizona waxaana hogaamiya aasaasayaasha Jamie Reardon iyo Cristine Vieira.
Tags: cristine vieiraraadso saameynraadso saamayntaadafyisida loo helo saamileyaalda'da saamayntatirakoobka dadka dhagaystayaasha ahsuuqgeynta suuqgeyntajamie cafis